अझै कति धमिलो पार्ने पानी ? « paniphoto
« पाठ्यपुस्तक किन्दा यसरी ठगिदैछ वाह ! क्या ‘गेस’ छ बाई !! »	अझै कति धमिलो पार्ने पानी ?
By -दिपध्वनी- on Thursday April 19, 2012	कार्टुन साभार : नागरिक दैनिकभर्खरै माओवादी सेनाविनाको नागरिक पार्टी भएको छ । पार्टीभित्र अनेकन विवाद भइरहदा पनि माओवादी नेतृत्वले देखाएको यो त्याग वास्तवमै प्रशंसायोग्य छ । पहिले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगोस् अनि मात्रै संविधान बनाम्ला भन्नेहरु बोलीबिहिन भएका छन् । संविधान नबन्ने भनेर देखाउँने यो कारण सकिएको छ । त्यस्तै संविधान नभएर संक्रमणकालमा धमिलो पानीमा माछा मारेर फाइदा उठाउँन पल्किएकाहरु पक्कै पनि निराश भएका छन् । निराशाहरु धेरे किसिमले बाहिर आउँछन्, हैसियत र नैतिकता अनुसार देखाउँने मात्र हो । दायाँको कार्टुन हेर्नुस् न, यसले सेना समायोजनको कतिसम्म खिल्ली उडाएको छ, विचार गर्नुस् । यो त लडाकुहरुलाई देखाइएको मानसिक त्रास हो । यसरी नै नेताहरुलाई पनि तर्साउँन खोजिदैछ । थप तस्विर र विश्लेषण हेर्न भित्र आउँनुहोस्
माओवादीका हिजोका लडाकुहरु सेनामा गएपछि नेपाली सेना नै हुनेछन् । उनीहरुलाई बोलाउँने नाम अर्कै रहनेछैन । त्यसो भए के सबैलाई ढोके, पाले, चोकिदार भन्दै हिन शब्दहरुले घोचिरहनु पर्छ ? हिजोसम्म हतियार चलाएर बसेकाहरु आज यो संक्रमणकालिन अवश्थामा अनुशासित हतियारबन्द सेना भएकै राम्रो हुन्छ । समाजमा रहेर तिनलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कायम नै रहन्छ । तर सेनामा गयौ भने फलानो हुन्छ, तिमीहरु ढोके र पालेमा फेरिन्छौ भनेर तर्साउँनेहरुको भित्री नियत के हो ? सुशासन, शान्ति र अमनचयन जस्तो त पक्कै देखिएन । यस्तै मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण सेना समायोजन रोज्ने लडाकुहरु ह्वात्तै घटेका छन् । अझ देशको राष्ट्रिय पत्रिकाले यस्तो गरिरहदा उनीहरुको मानसिक स्थिती कस्तो बन्ला ? के हिजोकै नेपाल प्यारो र फाइदाकारी लागिरहेको छ अझै पनि ? अझै रगतले पुगेन र ? यो एक सचेत नागरिकको प्रश्नमात्र हो ।
नेतालाई पनि जिस्काइदैछ नेतालाई गाली गर्नु र जिस्काउँनु एक किसिमको सचेतता मानिन्छ हाम्रो जस्तो देशमा । तर सबैलाई थाहा छ गालीले देश बन्दैन । देश बन्न सकारात्मक कुराहरुमा एकमत हुन सक्नु पर्छ । राम्रालाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नेले इन्कलाबका कुरा नगरेकै राम्रो । पत्रपत्रिका प्रकाशन यसै कारणले इन्कलाब बन्न नसकेको हो सायद । तलको तस्विर हेर्नुस्, तस्विरमा देखिएका मानिसहरु कस्का प्रतिक हुन् भनिरहनु नपर्ला ।
कार्टुन साभार : नागरिक दैनिकसेना समायोजनमा कुरो सक्किनुको मुख्य कारण यी दुबै नेता हुन् । एक प्रचण्ड र दोस्रा डा. बाबुराम भट्टराई । तर कार्टुनमा हिजोसम्म लडाकुहरुले घेरिएर बसेका नेताद्धय आज र भोलीमा एक्ला बनेको देखाइएको छ । यो कार्टुनको अर्थ नागरिक पार्टी भए भन्ने हुँदै होइन । त्यस्तो हुँदो हो त नेताद्धयका छेउछाउमा एकदुइजनामात्रै भए पनि हतियारविहिन मानिसहरु देखाइने थियो । यसले त समायोजनको निर्णय गरेर नेताद्धय एक्लिदै छन् भन्ने देखाउँछ ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ के समायोजनको चमत्कारिक र लचिलो निर्णय गरेर गल्ति गरेका हुन् यी नेताद्धयले ? यस्तो सन्देशले कसलाई फाइदा गर्छ? देशको राजनीतिक अस्थिरतामा यो सहायक बन्छ ? आफुलाई देशको चौथो अंग मान्नेहरुले गर्ने कर्म यस्तै किसिमको हुनु पर्ने हो ?
माओवादी पार्टीगत हिसाबमा हेर्ने हो भने यो निर्णयको ठुलो अर्थ छ ? नेताहरु कार्टुनमा देखाएजसरी नै एक्लिने हो र माथिको कार्टुनमा भने जस्तै लडाकुहरुलाई ढोके पाले हुनबाट बचाएर लडाकु नै बनाउँने हो भन्ने अर्को युद्ध थाल्नु पर्ने हुन्छ, के कार्टुन बनाउँने र छाप्नेहरुको चाहना यही हो ?
अन्त्यमा, बन्दै गरेको शान्तिप्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम नगरौं । कसैलाई हतियार बिसाएकोमा गल्ति गर्र्यौ भन्नुको अर्थ के हो बुझौं । नेपालका खोलानालाहरु संग्लिदै छन्, अझै कति धमिलो पार्ने र यसलाई ?
तपाईलाई कस्तो लाग्यो, तल कमेन्टमा लेखिदिनु है । Tweet
« पाठ्यपुस्तक किन्दा यसरी ठगिदैछ वाह ! क्या ‘गेस’ छ बाई !! »	4 comments to अझै कति धमिलो पार्ने पानी ?
· जवाफ दिनुहोस्	हिजो यादव पौडेलको murder सच्चा पत्रकार भएको कारणले नभइ स्त्रीलम्पट भएको कारणले हो भन्ने prove भैसक्यो । यसैले पत्रकारहरु नि पैसामा बिकेको कारण देशमा शान्ति र संविधान आउँनमा असर पुगिरको छ ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Raman
· जवाफ दिनुहोस्	हो मलाई पनि बिहानै पत्रिका पढ्दा यो चै नागरिकले ठिक गरेन भन्ने लागि नै राको थियो . तपैले कुरा उठाउनु भकोमा धेरै धेरै धन्यबाद . कम्तिमा यस्तो सकारात्मक कुराको बिरोध त नगर्नु नि. फेरी हतियार उठाउन किन उक्साउने?
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	कुसुम देवान
· जवाफ दिनुहोस्	युद्ध हुदा धेरैलाई फाइदा थियो अब तिनको रातको निन्द्रा हराउँने भो । नयाँ शान्त नेपाल जिन्दावाद ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Ratna Sundar
· जवाफ दिनुहोस्	पित-पत्रकारिता र प्रपोगोंड़ाको नमुना देखाएछन
यही Category बाटसेतो धरती र मेरो भ्रमदण्ड दिने अधिकार पनि छ भन्ने बिर्सियो राज्यलेनेपालमै पेट्रोलभन्दा महंगो पानीहेरिनसक्नुको लाजमर्दो नाच !सबै कुरा हामीले गर्ने भए सरकारले चै गर्छ के ?काठमाण्डौं विश्वविद्यालय छात्रावास – महंगो, सुविधाविहिन र असुरक्षितराजनिती ! राजनिती !! राजनिती !!!विद्यार्थी भरिया हुन् र ?जिम्मेवारी त लिएनौं, कम्तिमा सुनि त देउ !मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ?Online Users9 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार